दुवै खुट्टामाथि तर, १ मिनेटमा ६० पटक ‘पुसअप’ तोड्लान नेपाली ठिटोले विश्व रेकर्ड ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
दुवै खुट्टामाथि तर, १ मिनेटमा ६० पटक ‘पुसअप’ तोड्लान नेपाली ठिटोले विश्व रेकर्ड !
दीपक बोहरा/ दाङका ऋषि परियार विश्व कीर्तिमान तोड्ने दौडमा हुनुहुन्छ । उहाँ दुवै खुट्टामाथि पारेर गरिने ‘पुसअप’मा विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने दौडमा हुनुहुन्छ । गिनिजबुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा अहिलेसम्म खुट्टामाथि पारेर एक मिनेटमा ५१ पटक मात्रै पुसअप गरेको रेकर्ड छ । बेलारूसका सिर्हेई कुडायौले सन् २०१८ मे ३ मा ५१ पटक पुसअप गरेर विश्व रेकर्ड कायम गरेका थिए ।
उक्त भिडियो तथा साक्षीहरुको भिडियोलाई गिनिजबुक अफ वल्र्ड रेकर्डको कार्यालयमा इमेल गर्ने ऋषिले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रेकर्ड भएको उक्त भिडियोसहित करीब रु एक लाख पठाउनुपर्ने र त्यसको नतिजा १०/१५ दिनमा आइपुग्छ । “मैले आज गरेको पुसअप गरेको भिडियो र साक्षीहरुको रेकर्ड गिनिजबुकको कार्यालयमा पठाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्योसँगै करीब रु एक लाख पठाएपछि १०/१५ दिनमा नतिजा आउँछ, यदि पैसा नपठाएको खण्डमा भने नतिजा आउन पाँच÷सात महीना लाग्छ ।” तुलसीपुर उपमहानगरपालिका युवा तथा खेलकूद शाखाको सहयोगमा उहाँ यस पटक गिनिजबुकमा नाम लेखाउने दौडमा हुनुहुन्छ ।
प्रयास गर्दै जाँदा परियारले विस्तारै हातले उभिन सिक्नुभयो । अनि केही समयको प्रयासपछि विस्तारै–विस्तारै हिँड्न शुरु गर्नुभयो । यसरी प्रयास गर्दै जाँदा अहिले उहाँ हातले हिँड्न थालेको १३ वर्ष पुग्यो । लामो सङ्घर्ष र प्रयासपछि उहाँ अहिले उकालो, आरालोसमेत हिँड्नसक्ने हुनुभएको छ । यही सीपलाई लिएर उहाँ विश्व कीर्तिमानी कायम गरी आफ्नो जन्मभूमि र देशलाई चिनाउने दौडमा हुनुहुन्छ ।